लुटपाटमा दुई भारतीय संलग्न, भाग्न खोज्दा लुटेराको तिग्रामा गोली, पेस्तोल बरामद
विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिकाको कर्सियामा बैंक लुट्न खोज्ने तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
दुई जना भारतीयसहित तीन जनालाई प्रहरीले नेपाल भारत सीमा नाका मोरङको धनपालथान गाउँपालिका २ खैरवनाबाट सोमबार पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीले भारतको अररिया जिल्लाको शिवपुरदेखि ३२ वर्षीय सुनिल यादव, भारत गौराहाका ३५ वर्षीय विजय बहरदार र विराटनगर–३ मुनालपथका ३२ वर्षीय श्याम मुखियालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनीहरूलाई भारततर्फ भाग्न लाग्दा सीमा नाकादेखि पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरीका प्रमुख एसपी जर्नादन जिसीले जानकारी दिए । बैंक लुट्ने प्रयास असफल भएपछि को २५ प ३८९९ नम्बरको पल्सरमा भारतर्फ भान्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले लुटेरालाई पक्राउ गर्न खोज्दा भारतीय नागरिक बिजय बहरदार फरार भएपछि बायाँ खुट्टामा गोली लागेको छ ।
पक्राउ परेका तीनै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीमा राखेर अनुसन्धान सुरू गरेको छ । गोली चलेलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका एसपी जर्नादन जिसी, डिएसपी मन्जिल मुकारूङ घटनास्थलमा छन् । अहिले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको एसपी जिसीले जानकारी दिए । उनले तीन जना पक्राउ परेको जानकारी दिएका छन् । बैंकका कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार सोमबार दिउँसो आठ जनाको संख्यामा लुटेराको समूह आएको बताएका छन् । ‘अहिले घटनामा संलग्न तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ,’ एसपी जिसीले भने, ‘हामीले अनुस्न्धान सुरू गरेका छौं । यस घटनामा अरुको पनि संलग्न हुनसक्छ । हामीले खोजी कार्य जारी राखेका छौं ।’
सोमबार, २५ असोज, २०७८, साँझको ०७:२३ बजे
अति उत्तम कार्य ,सिमामा रहेको प्रहरी हाइ एलर्ट मा रहनु पर्ने भयो ,न कि पोका पोतेरा मा मात्र
मोतीराम ढुङ्गाना says:
नाकामा त्यहाका स्थानीयले कर्सियाबाट बैंक लुटेर भाग्दै ाआएको खवर पाएपछी स्थानीय हरुले बाटो छेकेर पक्रेका हुन । लुटपाटमा संलग्न हरु बेग्लाबेग्लै बाटो भागेकाले एउटा मो सा मा भएका तीन जना चेै पक्राउ परेका हुन । प्रहरीले पछी हिरासत मा लिएको हो । लुटपाटमा कति पैसा लुटियो अझेै किन अस्पष्ट छ? यो गम्भीर बिषयहो र अझेै सार्वजनिक भएको छैन किन? दुईसय मिटर पर रहेको प्रहरी ाआइपुग्न २० मिनेट लाग्छ फेरी प्रशासनिक वेवास्ता र कडाइ न्यून भएको अवस्थामा घटना भएको छ लकडाउनको बेला एक एक घण्टा नभइ पसल बन्द गराउन सक्रिय प्रशासन अहिले अझ चाडपर्वको बेला किन निष्क्रिय भएको होला ?